Ny sary sokitra tena zava-misy an'i Jacopo, mpanakanto nahay nianatra | Famoronana an-tserasera
Ny sary sokitra tena misy an'ity artista nampiana-tena ity
Ny fananana fampianarana samirery dia mitaky be dia be faniriana, fikirizana ary fahalianana amin'ny fianarana amin'ny raharaha kanto rehetra. Izy io dia azo ampiharina amin'ny fahaiza-manao rehetra azon'ny olona iray amin'ny fiainana ary tsy inona izany fa ny fiarahana aminy. Imbetsaka isika no tsy mahatsapa akory ireo fahazarana azontsika hampitaovana antsika amin'ny fahalalana ilaina hampiharana ireo teknika isan-karazany.
Zavatra mitranga amin'i Jago Jacopo Cardillo, a mpanao sary sokitra mampianatra irery izay ohatra faratampony ny zavatra voalaza hatreto. Miresaka momba ny mpanakanto italiana iray izahay izay afaka manova marbra sy vato ho lasa saro-takarina izay afaka mandray ny fiainany manokana rehefa eo imason'ny olona iray mankasitraka ny asan'ity mpanao sary sokitra ity izahay.
Hatramin'ny naha zaza azy dia nahaliana an'i Jacopo ny zavakanto ary indrindra indrindra, avy amin'i Michelangelo, ilay mpanao mari-trano italianina, mpanao sary sokitra ary mpanao hosodoko Renaissance dia noheverina ho iray amin'ireo mpanakanto lehibe indrindra teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona; ireo sary ireo dia mampiseho ny halehiben'ny mpanakanto.
Iray amin'ny nofin'i Jacopo ny lasa ny mitovy ankehitriny an'ny mpanao sary sokitra, ary avy amin'ny zavatra hitantsika amin'ny sanganasany kanto amin'ny endrika sary sokitra, eo amin'ny lala-mahitsy izy.
Asa vita amin'ny sary sokitra izay manome lanja manokana ny antsipiriany ary ny marin-toetra. Ny sary sokitra ananany dia afaka omena zava-misy tena izy, araka ny aseho amin'ny sary omena, sady mitaona ny fahatsapan'ny mpitsidika ho talanjona.
Ireo vatan'ny feno sarin'olombelona ny sary sokitra ary ireo ketrona izay mampiseho ny fandehan'ny taona. Toy ny tanana izay vaky ny hoditra dia mamorona ny ketrona amin'ny fiainana efa niaina.
Jacopo dia manana ny instagram so it afaka manaraka ny tsirairay amin'ireo tetikasa vaovao ianao ao anaty rano no alentika ao, ary ny tranokalanao hahita fampirantiana sy maro hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sary sokitra tena misy an'ity artista nampiana-tena ity
Ny sora-tanana voynich, ilay boky tsy dia fahita firy eto amin'izao tontolo izao
Fironana typografika 10 amin'ny 2018 izay tsy tokony hafointsika